12>> श्रेणी आभूषण
Bokarneya - हेरविचार
यो सुन्दर र धेरै रोचक कारखाना र Agave को परिवार पट्टी पर्छ। Bokarnei मातृभूमि मेक्सिको छ। मान्छे मा, यो "हाती खुट्टा" वा "ponytail" भनिन्छ। यी नाम सही र कारखाना को उपस्थिति वर्णन। Crohn साँच्चै एक मीठा समोसा भेला एक ponytail जस्तै हो। यसको मूल काण्ड पर्याप्त बाक्लो छ र यो हाती गरेको खुट्टा जस्तै हेर्न बनाउँछ जो विशाल तल thickens, bokarnei। यो फूल मा पसलहरु अक्सर कारखाना को एक प्रकार बेचन: bokarneya deflected। यो वनस्पति आफ्नो असामान्य उपस्थिति र हेरविचार को नातेदार आसानी लागि इनडोर बोट बीचमा आफ्नो लोकप्रियता प्राप्त छ। Bokarneya reflexed: हेरविचार फूल bokarneya को "बोतल" बिरुवाहरु बुझाउँछ। उहाँको बाक्लो डंठल पसलहरु भण्डारमा चिस्यान। Bokarneey हेरविचार अपेक्षाकृत सरल छ, केवल एक आरामदायी अवस्था लागि बोट प्रदान गर्न आवश्यक छ। यहाँ हेरविचार को आधारभूत नियमहरु फूल लागि हो: तापमान। यो वनस्पति सुन्दर अवस्था रुचि। गर्मी मा, Optimum तापमान छैन उच्च भन्दा 21 ° सी, र जाडो अवधिमा 7-8 ° सी भन्दा कम छ प्रकाश। Bokarnei अनुकूल उज्ज्वल diffused प्रकाश लागि। सिंचाई। यो वनस्पति भविष्यको लागि पानी भण्डारण गर्न accustomed छ भएकोले, अत्यधिक सिंचाई मूल क्षय हुनु नेतृत्व गर्न सक्छन्। मा वसन्त र गर्मी मध्यम कनस्तर आवश्यकता हो, र राम्रो bukarneyu हिउँदमा सकेसम्म सानो पानी। चिस्यान र मल। हेरविचार bokarneey आवधिक छिडकाव समावेश छ। एक हप्ता एक स्प्रे बोतल पानी संग कारखाना स्प्रे एक पटक यो Suffice। वसन्त र गर्मी मा, हरेक दुई सप्ताह, तपाईं houseplants लागि फूल तरल मल खुवाउन आवश्यक छ। bokarnei transplant। (लगभग हरेक2वर्ष) आवश्यकताअनुसार जवान बोट प्रत्येक वर्ष transplanted, र वयस्क छन्। तपाईं एक transplant bokarnei गर्दा, तिनीहरूले एकदम नाजुक छन्, जरा लागि बाहिर हेर्न र धेरै सजिलै तिनीहरूलाई चोट। तपाईं transplant पछि तेस्रो दिन मा बिरुवाहरु पानी सक्छन्। माटो मिश्रण तयार: माटो को बराबर मात्रा र leafy भूमि र बालुवा को नै राशि थप। फूल राम्रो जल लागि तयार गर्न एक पट मा रोपण अघि। रोगहरु bokarnei यहाँ मुख्य समस्या बढ्दै फूल जबकि तपाईं भेट हुन सक्छ छन् किनारों मा र अन्त पात मा सुकेका पनि उच्च एक तापमान वा चिस्यान कमीलाई सङ्केत;
स्पेनिश ब्रान्ड परिधान
स्पेनिश उत्पादकहरु सजिलै अमेरिका र इङ्गल्याण्ड देखि सबैभन्दा सुशील ब्रान्डहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। एक सभ्य स्तर र मूल्य निर्धारण नीति मा गुणवत्ता कपडे सबै महिला खुशी साथ यी लुगा लगाउने अनुमति दिन्छ। महिला भेषमा को भन्दा प्रसिद्ध स्पेनी ब्रान्डहरु लगभग निश्चित, कुनै पनि Fashionista Zara र साधारण देखि लुगा र सामान गुणवत्ता र मूल्य बीच एक उत्कृष्ट समझौता छन् के तपाईं बताउन हुनेछ। मूल डिजाइन र विशिष्ट शैली यी कुराहरू लोकप्रिय बनाउन। पहिलो स्थान Zara संसार भरि जानिन्छ जो लुगा को स्पेनिश ब्रान्डहरु, को सूची छ। हरेक वर्ष, ब्रान्डहरु जानिन्छ डिजाइनर दस हजार (!
गोथिक - यो केही युवा subcultures एक, दशकहरूमा लागि यसको लोकप्रियता retaining। उनको trappings पनि कुनै पनि प्रकारको सामान्य मा subcultures थियो टाढा भएकाहरूलाई मान्छे र गोथिक देखि विशेष, गहिरो aestheticized र अक्सर पछ्याउन विषय हो। गोथिक शैली मा मेकअप - यो एक समग्र Gothic छवि अभिन्न भाग हो। यस लेखमा हामी एक गोथिक बदलाव बनाउन कसरी कुरा हुनेछ। मेकअप गोथिक गोथिक मान्छे कहिलेकाहीं बनाउन-अप गोथिक काले को एक predominance संग, सधैं नै देखिन्छ भन्ने विश्वास सुदूर देखि - मोटी कालो आँखा पूर्ण सेतो अनुहार र कालो ओठ - यो हरर चलचित्रहरू को घरेलू दृष्टान्त एक किसिमको। पनि व्यापक यस रहनसहन हैलोवीन वा पोशाक बल लागि मात्र उपयुक्त छ भनेर विश्वास। यसैबीच, Gothic रहनसहन वजन र सबैलाई विषय मा बदलाव आफूलाई रोचक र उपयुक्त केहि रोज्न सक्नुहुन्छ (पूर्ण "युद्ध रंग" प्रयोग गर्न आवश्यक छैन भन्ने तथ्यलाई मात्र व्यक्तिगत तत्व लागू गर्न सकिन्छ - यति Gothic आँखा रहनसहन साँझ लागि सिद्ध छ) Gothic रहनसहन को मुख्य रंग बनाउन-अप को मुख्य रंग, खैरो रातो र नीलो को Shades, काले छन्। अनुहार छाला जरूरी vybelivaetsya विशेष हालतमा, ओठ र आँखा स्पष्ट बाहिर खडा। आवश्यक कस्मेटिक्स: आफ्नो छाला टोन, प्रकाश (वा पारदर्शी) पाउडर भन्दा लाइटर एक वा दुई Shades लागि toners;
एक सामान्य नियम हैसियतमा बनाउन-अप र लुगा छान्ने, महिला आफ्नो अंतर्ज्ञान र स्वाद प्राथमिकताहरू द्वारा निर्देशित छ। यो आज एक को छवि पूर्णतया मिलान त्यतिबेला, र भोलि गलत कुरा हो। कहिलेकाहीं हामी यो हामीलाई बसिरहेका लागि राम्रो छ किनभने बस आफ्नो मनपर्ने कुरा किन्न चाहन्छौं। तर दर्पण मा, यो रंग लागि उपयुक्त छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यस्तो punctures जोगिन, आफ्नो tsvetotip उपस्थिति लागि लुगा र रहनसहन चयन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। कसरी tsvetotip निर्धारण गर्न?
बच्चाहरु लागि हक्की
हक्की लामो संसारभरि एक लोकप्रिय खेल भएको छ। उहाँले tempers, बलियो व्यक्तित्व लक्षणहरु दिन्छ धीरज गाडिहरु। तथापि, यदि तपाईंको बच्चा लागि हकी राम्रो खेल?
आँटा केही मात्र किनभने आफ्नो तेजस्वी गंध को कुक मेरो जीवनमा एक पटक हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई एक कुनै चिया पार्टी लागि पूर्णतया उपयुक्त छ जो मह जिंजरब्रेड, छ। तपाईं अन्डा र घिउ, मा तर तेज दिन यो के, र राम्रो आफ्नो आंकडा लागि, क्लासिक भर पर्नुको प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो Lenten नुस्खा मह gingerbreads को दिल मा -। जिंजरब्रेड आटा, मसाले, मेवा, किशमिश को वाहेक संग मह संग मिश्रित छ कसरी मह जिंजरब्रेड कुक गर्न?
कम वेज चप्पल
कम Wedges मा महिला चप्पल - यो एक धेरै सहज गर्मी जूता र मोडेल विमोहक एडी ठूलो वैकल्पिक छ। तिनीहरूले, उज्ज्वल व्यावहारिक, स्टाइलिश र विमोहक हुन सक्छ। मोडेल को एक किसिम हरेक वर्ष धनी बन्ने छ, त्यसैले तिनीहरू हरेक वसन्त र गर्मी मौसम मा प्रासंगिक छन्। मोडेल चप्पल कम Wedges सबैभन्दा लोकप्रिय चप्पल छाला, साबर, वा बाक्लो ऊतक बनेको छन्। तिनीहरूले भाग-शहरी वा खेलाडी हुन सक्छ। आज, चिरपरिचित ब्रान्डहरु सानो Wedges मा आरामदायी जुत्ता विशेषता एक संग्रह उत्पादित। उदाहरणका लागि, ब्रान्ड चार्लोट ओलम्पिया कपडा चप्पल को एक नम्बर को आफ्नो अन्तिम संग्रह को एक शुरू। तिनीहरूलाई केही एक समुद्री शैली मा जारी गरिएको छ - सेतो र नीलो धारियों मा नीलो माथि र कील;